५१.५३ प्रतिशतले संक्रमित, संक्रमण सातामै तेब्बर..... - Bagaicha.com
Friday January 28, 2022 |
५१.५३ प्रतिशतले संक्रमित, संक्रमण सातामै तेब्बर…..
२६ पुष २०७८, सोमबार ०८:३४
काठमाडौँ — परीक्षण गरिएकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर पछिल्लो एक सातामा तेब्बर भएको छ । पुस १९ मा ९ हजार ७ सय नमुनाको आरटी–पीसीआर परीक्षण गरिएकामा ३ प्रतिशतमा मात्र संक्रमण देखिएको थियो । पुस २५ मा ८ हजार ८ सय ४८ नमुनाको परीक्षण गर्दा ९.५० प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमण विस्तारको यो तीव्रतालाई सरकारी अधिकारीदेखि विज्ञसमेतले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् । संक्रमण व्यापक विस्तार बन्नुमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । अहिलेकै गतिमा संक्रमण विस्तार भएको खण्डमा तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा–नपुग्दै मुलुकको करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संक्रमित हुने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । ओमिक्रोन भेरिएन्ट अति संक्रामक देखिएको छ । हाल हरेक २–३ दिनमा संक्रमण दोब्बर भइरहेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले भने, ‘यही गतिले संक्रमण फैलिने हो भने तेस्रो लहरमा मुलुकको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् १ करोड २१ लाख ५१ हजार २ सय २२ जना संक्रमित हुनेछन् ।’ हाल मुलुकमा ६ हजार ७ सय ५५ जना सक्रिय संक्रमित छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा २ हजार ९०, ललितपुरमा ८ सय ३ र भक्तपुरमा ५ सय ८८ जना छन् । मुलुकभरका सक्रिय संक्रमितमध्ये ५१.५३ प्रतिशत उपत्यकामै छन् । पछिल्ला दिनमा थपिएका संक्रमितमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पाइएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुकी निर्देशक डा. रुना झाले बताइन् । ‘ओमिक्रोनले गर्दा संक्रमित हुनेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दो क्रममा छ । अब परीक्षणमा एस–जिन नेगेटिभ आउनेलाई ओमिक्रोन नै मान्नुपर्छ,’ उनले पछिल्ला दिनमा प्रयोगशालामा एस–जिन परीक्षण गराउन आइपुग्ने अधिकतम नमुना काठमाडौं उपत्यकाकै हुने गरेको बताइन् ।
संक्रमण तीव्र बन्ने क्रमसँगै उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ । अघिल्लो साता ८ जना मात्र संक्रमित भर्ना रहेको वीर अस्पतालमा आइतबार दिउँसोसम्म बढेर २५ पुगेको छ । तीमध्ये ५ जनालाई कडा निमोनिया देखिएको, एक जनालाई भेन्टिलेटर र ४ जनालाई हाइफ्लो अक्सिजनमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ । निमोनिया देखिएका ५ जना ४०–६० वर्ष उमेरका छन् । वीर अस्पतालको कोभिड–१९ युनिफाइड सेन्ट्रल हस्पिटलका उपनिर्देशक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. प्रज्वल श्रेष्ठका अनुसार कोरोना संक्रमित नयाँ बिरामीहरूमा खोकी, ज्वरो, टाउको–जीउ दुख्ने र थकाइ लाग्ने समस्या अधिक छ । त्यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक साताअघि २० जना संक्रमितको उपचार भइरहेकामा आइतबार त्यो संख्या ३८ पुगेको छ । उनीहरूमध्ये अधिकांशमा निमोनिया देखिएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए । ‘पछिल्लो ३ दिनमा पोजेटिभिटी रेटसमेत बढेको छ,’ डा. शाक्यले भने, ‘हामीकहाँ भर्ना हुनेहरूमा ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या बढी छ । संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित हुने क्रम पनि बढेको छ । यो साता महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मात्र १५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । ‘आईसीयू स्टाफ, नर्स, चिकित्सक, शल्यक्रिया कक्षमा काम गर्ने गरी १५ जना संक्रमित भएका छन्,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले भने । संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिइरहेको भन्दै उनले चिन्तासमेत व्यक्त गरे । ‘केही दिनअघिसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमा संक्रमण न्यून थियो, तर पछिल्ला दिनमा तीव्र भइरहेको छ,’ उनले थपे । विज्ञहरूले संक्रमणको दर र अस्पतालहरूमा बढ्दो चापले कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको दाबी गरेका छन् । भाइरोलोजिस्ट एवं प्रदेश–२ जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रले डेल्टा भेरिएन्टको तुलनामा अत्यन्त संक्रामक ओमिक्रोनका कारण महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको दाबी गरे । ‘ओमिक्रोन भित्रभित्रै फैलिँदै समुदायमा गइसकेकाले सबैले थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ,’ डा. मिश्रले भने । उनले हालसम्म खोप नलिएका वा पूर्ण मात्रा लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई तत्काल खोप लगाउनसमेत सुझाए । दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका र बुढापाकाहरूलाई संक्रमण हुन नदिन मास्कको उपयुक्त प्रयोग, सामाजिक दूरी पालना, साबुनपानीले हात धुनु र हावा राम्ररी ओहोरदोहोर नहुने ठाउँमा बस्न नहुनेजस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा विशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । साभार : इका
धरहराको काम अझै
नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ८०
अस्पताल नेतृत्वको स्वार्थले, सरकारी
कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरमा ३४ को मृत्यु…..
‘एमसीसीकाे पक्ष र विपक्षमा लागेकाले जनतामा भ्रम छरे’ |Sarokar With Nimesh Banjade
याक्थुङ (लिम्बू) थरगतहरुले भूमिको रक्षार्थ गरेको छकलीटारको निर्णयहरू
रमेश उप्रेती र नायिका अनु शाहले गरिन लिभिङ टुगेदरको बचाउ
करिब एक दर्जन सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमै प्रवेश…..
हङकङले फेब्रुअरी ५ देखि आगमनका लागि क्वारेन्टाइन समय १४ दिनमा छोटाएको छ
धरहराको काम अझै ३५ प्रतिशत बाँकी…..
नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ८० वर्षयताकै कम…..
अस्पताल नेतृत्वको स्वार्थले, सरकारी फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि…..
गड्डाचौकी नाका हुँदै भारतबाट हुने आवतजावतमा रोक…..
भारतले एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा नेपाल सरकार मूकदर्शक…..
उपत्यकामा लागू भयो यातायातमा जोरबिजोर…..